रंगशाला विबादमा पाँडेले यि युवकलाई फोन गरेर के भने त्यस्तो ? र मच्चियो खैलाबैला ? हेर्नुहोस् भिडियो - OSNepal
चैत्र २५, २०७७ बुधवार ०९:११ बजे
विभिन्न खेलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा हातेमालोको आह्वान गरेका छन् ।
पछिल्लो समय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बिवादको बिषय बनेको छ । रंगशाला उपर सबैले सबै खालका बिचारहरु राख्दै आइरहेका छन् । धुर्मुसको यही अभियानलाई लिएर निर्देशक तथा कलाकार हरी उदाशी र कलाकार सबिता भट्टराई पहिलो पटक सँगै मिडियामा आएका छन ।
सबिताको आ,रोप छ कि उदाशिले रातारात आफ्नो बोली फेरे कसैको फोन आए पछी धुर्मुसको सपोर्टमा बोल्न थालेका हुन बाकी हेरौ भिडियोमा